Falanqeyn Horyaalka Kulamada EPL dhacaya | Warfaafiye
Warfaafiye Arrimaha Bulashada	Falanqeyn Horyaalka Kulamada EPL dhacaya
Dec 8th, 2012 – by ilkacase0
(Sports News) Waxaa manata la filayaa in Kulama Xiisa badan oo Qayb ka ah Horyaalka Dalka Ingariiska ay ka dhacaan Garoomada kala duwan ee Dalka Ingariiska, kuwaas oo aay iskaga horimaanayaan kooxha ku loolamaya horyaalka EPL.
Kulamada xiisaha badan waxaa ka mid ah Kulan ka aay ku balansan yihiin kooxaha Arsenal iyo WEstB waxuuna kulan kaa uu yahay kan ugu xiisaha badan ee aadka loo hadal hayo .
Kooxda Arsenala aya sedaxdii kulan ee uu danbaysay aan wax guul ah gaarin, kidib markii Laba kulan aay bar baro gashay kulan kii ugu danbayana looga badiyay gurigeeda waaxna maanta kulan kaa Kooxda West B uu ka dhacaya guriga Kooxda Arsenal.
Kooxda West B ayaa iyadu qudheeda waxaa aay kulamdii u danbeeyay soo wajahay guul darooyin waxana kulan kii u danbeeyay ka badisay kooxda Stok City waxana kulan kaa maanta uu leeyahay Xiisa gooniya .
Arsenal aaya Kulan kii Champion leage ah nasiisay Ciyaartooydeeda muhiimkaa waxana kulan ka maanta uu yahay mid Tababare winger uu doonayo in awoodiisa banaanka soo dhigo si guul oo u gaaro, waxana Kooxda Arsenal ku jirtaa kaalinta 10aad halka Kooxda West B ku jirto kaalinta shanaad .
Kulama kale ayaa iyana ka dhici doona Garooma kala duwan waxaana ka mid ah Kulamada dhacaya Kulan ka Kooxda Aston Villa iyo Stok waxana kulan kaa uu yahay mid si wayn loo wada sugayo, waxuna kulan kaaa uu ka dhici doonaa guriga kooxda Aston Villa ee Villa Back.
Kooxda Sunderland ayaa gurigeeda ku martigalin doonta Kooxda Chelsea waxana kulan kaa uu yaahy mid xiisa gooniya xanbaarsan Macalinka KMG ah ee Kooxda chelsea ayaa looga fadhiyaa in Kooxda uu guul ku hugaamiyo .
Kooxda Chelsea ayaa kulan kii champion Lege gaartay guul wayn kidib markii aay ku bar bartay Kooxda gurubka ay ku jirtay kaalinta hoose kaga jirtay, waxna guushaa aay gaartay laga yabaa in aay mar kale ku ceshato guul kale oo aay ka gaarto Kooxda Sunderland .
Kooxda Swensea ayaa la balansan Kooxda Norwich waxna kulan kaa uu ka dhici doonaa guriga Kooxda Swensea halka Kooxda Wigan martigalin doonto kooxda QPR oo horyaalka kaga jirta kaalinta ugu hooseea.
Recent CommentsAbati kiristian on Qaxootiga Soomaalida Holland oo mudaaharaad dhigay: Sawirrocali bashi on Qaxootiga Soomaalida Holland oo mudaaharaad dhigay: SawirroXamarCadeey on Soomaali oo magac ku raadineyso caayda Diinta Islaamkaمستشار الشياطين on Sydney oo weerar Argagixiso u ka socda: Daawo Videocabdi kuumade galmeys on Cumar C/rashiid oo R/Wasaaraha dalka Somalia noqonaya	Recent Posts	Sawirro: Muqdisho oo laga xusay 71 guuradii Booliska Somalia